Abahambisi beenkonzo zokuPhucula iKhaya eMississauga, Ontario
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Abahambisi bokuPhucula iKhaya Ontario Mississauga
IMississauga (mamela) sisixeko esikwiphondo laseKhanada iOntario kunye nedolophu yaseToronto. Imiswe kunxweme lweLake Ontario kuMasipala weNgingqi wePeel, kumda weToronto. Ngabemi be-721,599 njengobalo lwe-2016, iMousissauga ngumasipala wesithandathu kwabona bantu baninzi eCanada, owesithathu uninzi e-Ontario, kwaye olwesibini kwindawo enkulu ye-Toronto Area.Ukukhula kweMississauga kubangelwa kukusondela kwayo eToronto. Ngesiqingatha sokugqibela senkulungwane ye-20th, esi sixeko sitsala umdla wabantu beenkcubeko ezahlukeneyo kwaye sakhe indawo ephambili yesithili seshishini. Likhaya kwisikhululo seenqwelomoya i-Toronto Pearson International, isikhululo seenqwelomoya esixakeke kakhulu eCanada, kunye nekomkhulu lamashishini amakhulu aseCanada nakwamanye amazwe. Abahlali besixeko bahlala bebizwa ngokuba ziMississaugans.